महिलाले सबैभन्दा धेरै पुरुषको के मन पराउँछन् ? « Mero LifeStyle
पुरुष र महिलाको सेक्सुअल बिहेवियरलाई लिएर हालै मात्र एक स्टडी भएको छ । यो स्टडी अष्ट्रेलियाको क्वीसल्याण्ड यूनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरुले गरेका हुन् । उनीहरुले पार्टनरलाई लिएर पुरुष र महिलाको प्राथमिकता फरक फरक हुने गरेको बताएका छन् । साथै यो उमेरको हिसावमा परिवर्तन हुनेछ ।
अध्ययनका अनुसार, युवा पुरुष महिलासँग शारीरिक रुपमा आकर्षित हुन्छन् भने महिला भावनात्मकताको खोजीमा हुन्छिन् । डा. स्टीफन ह्वाइटले भनेका छन्, स्टडीमा केही पुरानो शोधलाई पनि समर्थन गरिएको छ । १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहमा पुरुष र महिला एकअर्काको अपीयरेन्सको आधारमा धेरै आकर्षित हुन्छन् । यो समयमा उनीहरुको फर्टीलिटी पीकमा हुन्छ, तर उमेरका साथसाथै यो कम हुँदै जान्छ । त्यसपछि व्यवहार र व्यक्तित्वलाई प्राथमिकता दिएको अध्ययनले बताएको छ ।
त्यस्तै २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहकाले लुक्सलाई धेरै मन पराउँछन् । यो अध्ययनका लागि शोधकर्ताहरुले १८ देखि ६५ उमेरका हजार बढी अष्ट्रेलियाली नागरिकको डेटा अध्ययन गरेको थियो । यी सबैले सेक्स सर्भेमा भाग लिएका थिए । शोधकर्ताहरुले भाग लिनेहरुलाई सेक्सुअल अट्रेक्शनसँग जोडिएका कुराको सल्लाह लिएका थिए । यी ९ कुरा उमेर, आकर्षण, शारीरिक बनावट, वुद्धि, शिक्षा, आय, विश्वास, स्वतन्त्रता र भावनात्मक सम्बन्ध थिए ।
अध्ययनका अनुसार महिलाको तुलनामा पुरुषले शारीरिक बनावटमा महत्व दिएका थिए । आयलाई कम महत्व दिने कुरामा स्त्रीपुरुषको एउटै राय थियो । पुरुषको तुलनामा महिलाले शिक्षा र बुद्धिमतालाई धेरै महत्व दिएका थिए । त्यस्तै पुरुषले महिलाको खुल्ला विचारलाई महत्वपूर्ण मानेका थिए । एजेन्सीको सहयोगमा
अमेरिकाले अनुदान दिएको फाइजर खोप नेपाल आइपुग्यो, १२ वर्ष माथिकालाई लगाइने
अमेरिकी सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको एक लाख ६२० डोज कोभिड खोप नेपाल आइपुगेको छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन